I-India yizwe elimane lizungeze izindawo ezimangalisayo zokuthola, kepha phakathi kwezindawo ezingavamile kakhulu i-Odisha empumalanga yezwe eduze ne-Bay of Bengal. Kokuvakasha abanolwazi, Odisha - owaziwa ngokuthi u-Orissa kuze kufike i-2011 - inikeza ukuhlanganiswa kwemisebenzi eminingi ehlanganisa imifino ye-wildlife, ama-hikes amahle, namathempeli amahle omlando, u-Odisha kufanele abe ohlwini lwamabhakede ohambo lwakho, futhi ungabhala iholide lakho elilandelayo nge-Packages yethu ye-Odisha.
I-Odisha, eseningizimu yesifundazwe saseWest Bengali, inomlando omude futhi othakazelisayo kanye nesiko lanamuhla elicebile futhi elinamandla. Kukhulunywa ezincwadini zomlando ezineminyaka engaphezu kwengu-2 000 ubudala, okusho ukuthi yindawo enomlando omude futhi othakazelisayo, kodwa namuhla uyindawo ehambelayo futhi ejabulisayo ekhula ngokushesha. I-Odisha Tour Packages ikusiza ukuthi uhlole ukuhlukunyezwa kwezindawo ezingavamile
Unyaka ngamunye, Odisha ezokuvakasha iyakwazi ukuthandwa kakhulu njengoba izivakashi eziningi futhi zifika zizocwilisa ezintweni ezingenakulinganiswa zesifunda, kusukela emaphandleni amahle emaphandleni kuya emadolobheni amakhulu.
Namuhla, kunezinto eziningi ezingabonakali lapho izivakashi zingafunda ngomlando ka-Odisha othakazelisayo. Ezinye zezinto ezindala kunazo zonke esifundeni kufaka phakathi imidwebo yamadwala kaGudahandi, okucatshangwa ukuthi ingaphezu kweminyaka engu-20,000. Ukuhamba ngaphakathi kule mihume ukuhamba ngempela ezinyathelweni zokhokho bethu abade kakhulu. I-Odisha Tour Packages yethu iqinisekisa ukuthi unolwazi lokuphila kwakho konke.
Lokhu kungenxa yokuthi isayithi liwubufakazi bokunye kwemvelo yakudala yesintu, futhi ukuvakashela njengabakhenkethi ku-Odisha ukuzwa ngempela izinkulungwane zeminyaka yomlando ezembesa isifunda. Ezinye izingosi zomlando eziyinkimbinkimbi ziyashesha kakhulu kepha azikho ezithakazelisayo - njengethempeli eliqhakazile le-Konark Sun, elidumile emhlabeni wonke ngenxa yobuqambi balo obuhle. Eyakhelwe ku-13th Century, nakuba ezinye izingxenye zethempelini manje ziyizicucu, imidwebo eminingi enhle kunazo zonke futhi eyinkimbinkimbi isalondolozwa. Nge-Pacishages yethu ye-Odisha uzokwazi ukuthi yiyiphi incazelo yangempela yobuhle.